Ubuntu Touch dia miala amin'ny Bionic Beaver ary hiorina amin'ny Ubuntu 20.04 | Ubunlog
Ny Ubuntu Touch dia mandalo an'i Bionic Beaver ary hiorina amin'ny Ubuntu 20.04 amin'ny tapany voalohany amin'ny 2021
Efa ho 5 taona izay no nanombohan'ny BQ ny Aquaris M10 Fanontana Ubuntu. Tadidiko ny fanandramako azy, amin'ny ampahany satria nieritreritra aho Ubuntu Touch dia ho toy ny Ubuntu izany, saingy mifandray. Efatra taona taty aoriana dia afaka nanandrana azy aho, saingy efa niaraka tamin'ny PineTab iray, hitondra fahadisoam-panantenana lehibe nefa azo takarina amiko: tsy mitovy amin'ny kinovan'ny birao izany, ary misy fameperana tsy azoko lazaina fa mihevitra ny tenako ho mpankafy aho.
Saingy eto isika dia tsy hiresaka momba an'io karazana fameperana na hadisoana io, fa momba ny fototr'izy ireo. Ny Ubuntu Touch amin'izao fotoana izao dia mifototra amin'ny Xenial Xerus, izany hoe, Ubuntu 16.04 izay navoaka tamin'ny volana aprily 2016. Taorian'ny fotoana fohy niadian-kevitra dia nanapa-kevitra ireo mpamorona ao amin'ny UBports fa mendrika handray ambaratonga lehibe kokoa ary aorian'ny famaranana ny fizotran'ny fiainana 16.04 , Ubuntu Touch mifamadika miorina amin'ny Ubuntu 20.04, codenamed Focal Fossa ary ny kinova LTS farany an'ny rafitra fiasan'ny Canonical.
Efa miasa izy ireo ka ny Ubuntu Touch dia miorina amin'ny Ubuntu 20.04
Saingy alohan'ny handraisanao ny dingana lehibe dia misy tanjona iray anelanelany: UBports Miasa izy dieny izao ka ny rafi-piasany dia mampiasa ny Qt 5.12, izay manome toky izy ireo fa tena hisy izany amin'ny OTA manaraka. Raisina an-tsaina fa ny farany natomboka dia ny OTA-15, Ubuntu Touch no andrasana hampiasaina Qt 5.12 amin'ny OTA-16.
Ary rahoviana no hatao ny fitsambikinana amin'ny Ubuntu 20.04 Focal Fossa? UBports dia tsy nanome daty marina, mihoatra tamin'ny tapany voalohany tamin'ny 2021. Tsiahivina fa hitsahatra tsy hahazo fanohanana ny Ubuntu 16.04 amin'ny volana aprily amin'ity taona ity, ka tsy ratsy ny fanovana natao talohan'izay. Saingy ny tena marina dia ataon'ireo mpandrindra laharam-pahamehana i Lomiri, ny tontolon'ny sary, hatrany amin'ny fototr'ilay rafitra, ka tsy hahagaga raha maharitra ela kokoa izy ireo ary mandray ny dingana efa fahavaratra. Na izany na tsy izany dia efa nanamafy izy ireo fa efa mandeha ny tetezamita.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu Phone » Ny Ubuntu Touch dia mandalo an'i Bionic Beaver ary hiorina amin'ny Ubuntu 20.04 amin'ny tapany voalohany amin'ny 2021
micaela dia hoy izy:
Manantena aho fa handao ahy izy ireo
Mamaly an'i micaela
Cosmonium, rindrambaiko fikarohana sy astronomia malalaka
Ny Firefox 85 dia manala tanteraka ny Flash Player, misy ireo asa vaovao manohitra ny fanarahan-dia sy ireo zava-baovao ireo